टिप्स Archives - HealthyKhabar
काठमाडौं, ८ भदौ । हाँस्दा स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुनेबारे हामीले सुनेका छौं तर, रुँदा पनि फाइदा हुन्छ भनेर कमैलाई थाह होला । मानिस दुई हिसाबले रुन्छन् एउटा खुशीमा र अर्को दुःखमा । तर, सामान्यतः रुन कसैलाई पनि मन पर्दैन । तर, चिकित्सकको भनाई मान्ने हो भने मानिसले बेलाबेलामा रुनु पनि पर्छ । रुनु स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेडिकल युनिभर्सिटी अफ ओहायोले गरेको अनुसन्धानमा पनि रुँदा शरीर हल्का हुनुको साथै दुःखलाई लुकाएर राख्नुभन्दा त्यसलाई बाहिर निकाल्नु नै राम्रो हुने जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा यलु जोशीले लेख्नुभएको हो। अनुसन्धानमा भावनात्मक, शारीरिक र सार्वभौमिक रुपमा व्यक्तिको आँखाबाट आँसु निस्कने बताइएको छ । मानिसले तीन किसिमका आँसु निकाल्छन् ः बेसल, रिफ्लेक्स र साइकिक । बेसल आँसु खुशीका कारण निस्कन्छ । रिफ्लेक्स आँसु धुँवा वा प्रदूषणका कारण निस्कन्छ । साइकिक आँसु भावका कारण निस्कन्छ । यही साइकिक आँसु निस्कँदा तौल कम हुने हो । हाँस्नु मानिसका लागि…
कंगोमा इबोलाबाट झण्डै २ हजार ब्यक्तिको मृत्यु
जेनेभा, ७ भदौ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले प्राणघातक इबोला रोगका कारण अफ्रिकी मुलुक कंगोमा एक हजार ९६५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । संगठनले पछिल्ला १० सातामा इबोलाको संक्रमण स्थिर रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ । डब्लुएचओका स्वास्थ्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा माइक रायनले मध्य जुनसम्म झण्डै ८० जना नयाँ रोगी फेला परेको बताउए । उनले पछिल्ला दुई तीन सातादेखि नयाँ संक्रमित बिरामीको संख्या घट्दै गएको बताए । उनले भने, “यो प्रवृत्तिमा निरन्तर कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।”डब्लुएचओले यस रोगसँग जुध्न ६७० जनाभन्दा बढी कर्मचारी कंगोमा खटाएको छ । उनले भने, “केही क्षेत्रमा हामीले राम्रै प्रगति गरेका छौं । हामीसँग खोप पनि उपलब्ध छ । निगरानी र खोपका कारण यो रोग तिब्र गतिमा अहिले फैलिन पाएको छैन ।” कंगोमा यो रोग सबैभन्दा बढी घातक मानिएको छ। पछिल्लो समय कंगोको उत्तरी शहर मम्बासामा यो रोग देखिएकाले सबैलाई चिन्तित बनाएको डब्लुएचओले जनाएको छ । रासस
कम्युनिष्ट नेता विप्लवका छोरा प्रकाशले मेडिकल माफिया विरुद्ध आन्दोलन गर्ने
काठमाडौ। कम्युनिष्ट नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पुत्र प्रकाश चन्दले चिकित्सा शिक्षामा मौलाएको विक्रिति विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेकाछन् । उनले चिकित्सा शिक्षामा अनियमितता र माफियातन्त्र मौलाएर जथाभावी शुल्क असुल्ने तर श्रमिकहरुमाथि शोषण गर्ने गरेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलनको घोषणा गरे । चिकित्सकको पारिश्रमिक वृद्धि देखि शिक्षाका नाममा जथाभावी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । समितिले भर्नाको हकमा पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, विभिन्न विषयमा सरकारले तोकेको शुल्कको आधारसहित प्रष्ट पार्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको उचित तलब, सुरक्षा र अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय र विद्यार्थीलाई पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्ने, मेडिकल कलेजलाई सरकारले सहुलियतता प्रदान गरी मेडिकल कलेजले आम नागरिक र विद्यार्थीलाई सोही अनुसार सुविधा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । माग पूरा नभए कडा कदम चाल्न वाध्य हुने भनिएको छ । चन्दले सरकारल चिकित्सा शिक्षाको शुल्क बढाएकोमा जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले भने,‘सरकारले किन शुल्कवृद्धि गरेको हो जवाफ दिनुपर्छ ।’ सरकार आफै…
बसेर कुनै राम्रो पुस्तक पढ्नु तनाव घटाउने सजिलो उपाय बन्न सक्छ। तर पुस्तक कसरी मानसिक सन्तुलन कायम राख्न उपयोगी हुन्छ त? तनाव बिर्सन पुस्तकले अरू चिजले भन्दा बढी सघाउँछ। बीबीसीले बिब्लियोथेरपिस्टहरू अर्थात् किताबको सहयोगले मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलन राख्न सहयोग गर्नेहरूबीच चलाएको छलफलबाट आएका मुख्य सुझाव यस्ता छन्: तनावमुक्ति र फुर्ति उचित कथा पढ्न सकियो भने हामीलाई त्यसले फेरि फुर्तिलो बनाउँछ र संसारलाई हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण पनि दिन्छ। बिब्लियोथेरपिस्ट इला बर्ट्हाउडसँग यदि ब्रिटेनका पूर्वप्रधानमन्त्री टेरिजा मेले कुन पुस्तक पढौँ भनेर सुझाव मागेको कल्पाना गरौँ। लेखक तथा लन्डनको स्कूल अफ लाइफमा मानिसहरूलाई पुस्तक पढ्न सुझाव दिने बर्टहाउड भन्छिन्, "उनले सन् १९७८ मा अमेरिकी लेखक हुबर्ट सेल्बीले लेको 'रेक्युयम फर अ ड्रीम'बाट सुरु गर्न सक्छिन्।" उक्त उपन्यास लागुपदार्थ दुर्व्यसनसँग सङ्घर्ष चार मानिसको कथा हो जसको आधारमा सन् २००० मा चलचित्र बनाइएको थियो। कथा दु:खद भएपनि 'टरिजा मेले यसमा सम्बन्ध भेट्ने' बर्टहाउडले बताइन्। "यो पुस्तकको मुख्य सन्देश भनेको आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने र मौका खोज्ने…
के हो छारे रोग?कसरी बच्ने !
काठमाडौं,२६ साउन । छारे रोग कहिलेकाहीँ अपर्झट देखा पर्ने र रोकिने गरे पनि यो निकै खतरनाक रोग हो । यो रोग लागेका मानिस आफैंमा सधैं एकैखाले होस र सचेत अवस्थामा हुँदैनन् । यो रोग मानिसलाई मात्र नभएर पशुमा पनि देखा पर्छ । यो एक किसिमको मानसिक रोग हो । यो रोगलाई स्थानीय जनताले विभिन्न नामले चिन्ने गर्छन् । कसैले यसलाई मृगी, चरिफाय, फफड्के र रिङ्ने पनि भन्छन् । प्रायः कमजोर हृदय र सोच भएका व्यक्तिमा यो रोग देखिन्छ । यो रोग लागेको व्यक्तिलाई रोगले कति बेलामा सकस पार्छ, त्यो भने थाहा हुँदैन । यो अनियमिततामा हुन्छ । यसको पूर्वानुमान वा संकेत पनि हुँदैन । यो रोग लागेका मानिस बाक्लो हुल र भेला, रंगी विरंगी कपडा, आँखा तिरमिराउने घाम, गतिमा रहेको नदीको पानी, संगीतको चर्को धुन आदि सुनेपछि पनि अचानक मुर्छा (अचेत) पर्छन् । यो अवस्थामा रोगी बेहोस भएर लडेका हुन्छन् । यो रोगले समातेका रोगीलाई निको पार्ने कुनै पनि औषधि…
रुघाखोकीको भाइरसले मूत्रथैलीको क्यान्सर निको पार्न सक्छ
रुघाखोकीका लागि जिम्मेवार एक प्रकारको भाइरसले मूत्रथैलीमा रहेका क्यान्सरका कोषहरूलाई मार्न मद्दत गर्न सक्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ। सानो स्तरमा गरिएको उक्त अध्ययनका क्रममा एकजना बिरामीमा क्यान्सरको सङ्केत पूर्ण रूपमा निर्मूल भएको र अन्य १४ जनामा क्यान्सर सम्बन्धी कोषहरू मरेको प्रमाण फेला परेको थियो। ब्रिटेनस्थित युनिभर्सिटी अफ सरीका अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त भाइरसले क्यान्सरको उपचारमा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्ने र क्यान्सरको सङ्क्रमण दोहोरिने सम्भावना घटाउने विश्वास लिएका छन्। मूत्रथैली सम्बन्धी क्यान्सरको क्षेत्रमा कार्यरत एउटा संस्थाले वृहत् अध्ययनबाट पनि यस्तै परिणाम आए त्यो निक्कै उत्साहप्रद हुने बताएको छ। निशाना ब्रिटेनमा हरेक वर्ष लगभग १० हजार एनएमआइबीसी भनिने थैली सम्बन्धी क्यान्सरका नयाँ बिरामी देखिने गर्छन् र त्यसलाई आम रूपमा देखिने क्यान्सरको सूचीमा दशौँ स्थानमा राखिएको छ। हाल मूत्रथैलीको क्यान्सरको उपचार पद्धति निक्कै कडा छ र त्यस विधिले गम्भीर र विषाक्त असर समेत गर्ने गर्छ। निको भइसकेपछि पनि क्यान्सर दोहोरिएको छ कि छैन भनेर गरिने नियमित जाँच समेत महङ्गो छ। यो उपचारका क्रममा १५ जना…